Nke a bụ otú Oppo A12e si lee onyinyo a na-ebipụta na eze | Gam akporosis
Nke a bụ ihe Oppo A12e dị ka onyonyo e bipụtara na eze
Mgbe o kwuchara OPPO A12 na nso nso a, ugbu a, anyị metụrụ isiokwu nke ekwentị ntinye ọzọ site n'aka ndị na-emepụta China, nke ga-abụ nsụgharị dị mkpụmkpụ nke mbụ wee rute dị ka Oppo A12e.
Oppo A12e dị ka a OPPO A3 ama ama. A na - atụ aro nke a site na myirịta yiri nke ekwentị mkpanaka a nwere na nke ebuputara na 2018 dị ka ama ama arụmọrụ.
Oppo A12e pụtara na onyonyo a sụgharịrị
Dị ka ọnụ ụzọ GSMArena na-adịbeghị anya kọrọ ya, A12e pụtara na weebụsaịtị ụlọ ọrụ Vietnamese, ma ewepụrụ ya obere oge, nke na-egosi na ọ bụ njehie nzacha.
Enweghị ozi dị na njirimara na nkọwapụta teknụzụ nke ekwentị a, nke mere na ihe ọ bụla a pụrụ ikwu banyere ya ga-abụ akụkọ efu. Anyị ga-echere ka onye nrụpụta China kpughere ụfọdụ ozi gọọmentị gbasara ekwentị, mana anyị nwere ike iburu ụdịrị ọhụụ a sụgharịrị ka ọ bụrụ mmalite mmalite iji chee echiche banyere agwa ya.
Oppo A12e na-enye
N’iburu n’uche na Oppo A12 ga-abụ ihe atụ dị elu karịa A12e a, anyị nwere ike iwere njirimara ya dịka ntọala ma kwenye na ọ bụ ụdị ama ahụ yiri ọkwa ọkwa.
Oppo A12, dị ka anyị kwuburu na mbụ, bụ ngwaọrụ o nwere IPS LCD ihuenyo nwere 6.22 ″ diagonal na mkpebi HD +. Nke a nwere ụdị azụ mmiri na-achakarị ma na-agachikarị anya ma dị warara nke a na-akpọ nkenke bekee na-akwado ya.
Mediatek's Helio P35 bụ chipset anyị na-ahụ n'okpuru mkpuchi nke ngwaọrụ a. Chipset nke 12nm kwuru na octa-core conglomerate 53GHz Cortex-A2.3. W.
Oppo si Reno Ace 2, a elu-arụmọrụ ọnụ banyere nke ihe niile na-ama mara
Azụ Oppo A12 nwere modulu foto nke nwere oghere 13 MP nwere oghere f / 2.2 yana onye na-agba egbe nke abụọ MP nwere oghere f / 2. Onye na-agbapụ onwe ya nke onwe ya n'ọkwa nke panel ahụ bụ 2.4 MP (f / 5). Kedu ihe ọzọ, A gam akporo nke dabere na ColorOS 6.1.2 ga-abia n’elu na ngwa. Ọ dịkwa mma ịmara na ọ tụrụ 155.9 x 75.5 x 8.3 mm ma tụọ gram 165.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nke a bụ ihe Oppo A12e dị ka onyonyo e bipụtara na eze
10 smartphones dị ike nke March 2020, dị ka AnTuTu
Gbalịa Amazon Prime Video n'efu maka otu ọnwa